Kuenderera mberi kuri kuzivikanwa kwe kushandisa vatambi vemuviri (uye mawatch) vanga vachikwira nemhando dzakasiyana siyana dzevashandisi kusarudza kubva kwavari kuti vavatungamirire kuti vagare vakagwinya. Mazhinji mawindo ehutano anouya neyakajairwa zvinhu sekuchengeta kuteedzera kwekurova kwemoyo wako uye kuchengetedza huwandu hwematanho pazuva. Kune a wiricheya mushandisi, vangangoda kutsvaga yekugwinya tracker inoenderana nezvavanoda. Fitness trackers vachiri kuenderera mberi kuvandudza pekugara akananga pawiricheya vashandisi asi kana zviri izvozvi, iwo akanyorwa pazasi ndiwo anofanirwa kufunga nekuchengeta ziso.
Apple ine akawedzera wiricheya maficha e wiricheya vashandisi nekubatanidza zvakasiyana pushing matekiniki ekusiyana-siyana kumhanya, wiricheya kurovedza muviri, uye Nguva Yekutenderera chiziviso chinozivisa vashandisi kuti vatore zororo uye. kusunda kutenderedza. Dzvanya pano kuti uwane rumwe ruzivo nezve maficha.
Fitbit Flex ndeye fitness tracker iyo inoteedzera wiricheya kufamba se "nhanho" pamwe nezvimwe zvinhu senge koriori kupisa uye yekurara mapatani. Iyo haina skrini senge vazhinji vanoita zvemuviri uye varindi. Panzvimbo pezvo, iri bhendi reruoko riri nyore raunopfeka. Kuti uwane kufambira mberi kwezuva nezuva, iwe unobvumirana neruzivo ku smartphone kuti uone ruzivo.
Freewheel ndeye bespoke app iri dhizaini yakanangana nevashandisi vewiricheya kuti vatarise kusimba kwavo. Ichiri kuenda kuburikidza nebudiriro asi unogona kudzvanya pano kutarisa vhidhiyo kuti uone izvo zvichave zvichipiwa neapp.